Allgedo.com » 2010 » December » 10
Home » Archive Daily December 10th, 2010 Dagaallo Khasaara dhaliyay oo dib uga qarxay deegaanka Galgala ee gobolka Bari. Dec 10, 2010 Dagaall culus ayaa dib uga qarxay buuralayda Galgala ee gobalka Bari kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulka Puntland iyo xoogaga deegaanka oo diidan siyaasadda maamulka Faroole.
Wararka nagasoo gaaraya Boosaaso ayaa sheegaya in dagaalka uu yimid kadib markii ay weerar soo qaadeen xoogag uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Saciid Atam waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday muddo 2 saacadood ah.
Dhaawacyada... Diyaarad Hub u siday maamulka Puntland oo lagu qabtay Garoonka Hargaysa. Dec 10, 2010 Khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay maamulada Somaliland iyo Puntland kaasi oo salka ku haya awoodda gobalka oo maalmihii lasoo dhaafay ay fara gelino kusoo samaynayeen shirkado shisheeye iyo dowlado ajaanib ah.
Wararka ka imaanaya magaalada Hargaysa ayaa sheegaya in shalay gelinkii dambe diyuurado hub iyo agab ciidan siday lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaaladaasi waxaana kasoo baxaya warar... Radio Allgedo/ Waraysiyo